I-Courgettes yaseKorea ebusika - Iminwe idiba, ijikeleza nemifuno, ukupheka ngokukhawuleza - iresiphi enomnandi kakhulu ngesithombe se-zucchini ebusika kwisiKorea
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Ukupheka kweebhanki ebusika
I-Marinou zucchini eKorea ebusika - zokupheka ezona zihle kakhulu
I-Sharp, kodwa nge-sweetness, kwaye i-zucchini ecocekileyo kakhulu eKorea-i-snack efanelekileyo kuzo zonke iziganeko. Okokuqala, ukulungiselela ukulungiselela ubusika kulula kakhulu. Okwesibini, kukho iindlela ezininzi zokupheka kwiitrogetti ezimnandi zaseKorea zokupheka ngokukhawuleza: ukuvuna, ukujikeleza ngokukhawuleza, ukutshintsha "Iminwe ithawula." Kwaye njengoko uyazi, iindlela zokupheka ngokukhawuleza ezinceda umncedisi ukuba athenge ixesha elifutshane lokuvuna ngexesha elifutshane. Okwesithathu, i-taste and bright flavour yebillet ibaluleke ngokukhethekileyo ebusika, xa kuthe kwithebula lethu ukuze kungabi nanele imifuno yehlobo. Ukuhlamba i-zucchini e-Korea (iresiphi ebusika) ingaba ngeendlela ezininzi. Kodwa ezidume kakhulu kwaye, njengoko zithetha, zibonakalisiwe, zizinto ezimbini ezikhethiweyo - iindandatho (imijikelezo) kwaye zifakwe kwi-grater ekhethekileyo. Yaye ekubeni ingqalelo yokungathathi hlangothi kwezityalo zintsholongwane zinegalelo ekuveliseni izilwanyana, imifuno eminingi yaseKorea isoloko idibaniswa kubo. Iindlela ezininzi ezihlukeneyo kunye nezondlo kakhulu zokupheka i-zucchini eKorea ebusika kunye neefoto kunye namavidiyo uya kufumana.
I-zucchini ezihlwayayo eKorea ukupheka ngokukhawuleza ebusika - iresiphi yesinyathelo-nge-nyathelo ngesithombe
Iiregetti ezimnandi kwiziko laseKorea zokupheka ngokukhawuleza ebusika ukusuka kwinqanaba elingaphantsi kwinqanaba elingezantsi, zilungiswe ngokulula kwaye azidingi ukunyanzelisa. I-recipe isebenzisa i-aple cider viniga, enika i-billet ekhethekileyo inqaku le-flavour. Funda ngokubanzi malunga nendlela yokwenza i-zucchini ecolileyo eKorea ebusika kwi-recipe yokupheka kwangoko.
Izithako eziyimfuneko zeergetgettes ezimnandi zaseKorea ukutya okukhawulezayo ebusika
i-zucchini - ii-3.
anyanisi (amancinci) - 1 pc.
ityuwa -2 tbsp. l.
lwesardard omile -1, 5 tsp.
i-aple cider iviniga-iiglasi
Imbewu yesinaphi - 1, 5 tsp.
- 1 tsp.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo zeergetgettes ezimnandi kwi-Korean ukutya okukhawulezayo ebusika
I-Zucchini kufuneka uthabathele le recipe encinane kakhulu, ngoko bahamba ngokukhawuleza. Imifuno kufuneka ihlanjwe kwaye igalelwe iinqumle ezincinci kunye ne-peel.
I-bulb iyahlanjululwa kwaye iphinda ihlanjwe ngokukhawuleza ngamaminithi. Sidibanisa kunye anyanisi kunye ne-zucchini, zongeza ityuwa.
Hlanganisa kakuhle kwaye ungeze amanzi athile abandayo, ungabhekisana ngqo kunye ne-cubes cubes. Sihlola ukuba zonke iindidi zucchini ziphantsi kwamanzi. Shiya ngeyure.
Ithawula lephepha lilandelwa ngamaxesha amaninzi. Gcoba amanzi uze udibanise isikwashi ngokulula. Sisasaza iindidi zeervegetti kunye neesigodlo ze-anyanisi kwiluwula. Yeka imizuzu yeshumi, ukuze iphepha lidle umswakama ongaphezulu.
Okwangoku, silungiselela i-marinade. Kwiqhosha elincinci uthele iviniga, faka i-mustard powder kunye ne-turmeric, udibanise kakuhle. Emva koko faka imbewu yesardadi uze uyibeke emlilweni. I-Marinade izisa kwi-thumba kwaye ubilise ngokusemthethweni imizuzu engama-3.
Sifaka ingxowa engenamanzi nge-zucchini kwaye siyigcwalise ngokukhawuleza nge-marinade eshushu. Sivalela phezulu ngenqwelwana kwaye emva kokupholisa ngokupheleleyo siyithumela kwindawo epholileyo okanye siyigcine kwisiqandisini.
Iinqongo ze-Courgettes, zihlambulule kwiKorea-inyathelo lesiteyibhile ebusika
I-zucchini zasemanzini kwiisongo zaseKorea ebusika ukusuka kule recipe elandelayo ukunambitha into efana ne-mushroom. Ndiyabulela iziqholo ezikhethiweyo kunye nemifuno, ezo zucchini zifumana iinkowa ezikude. Ngoko ke, ukuba ufuna ukumangaliswa ngamakhaya aneesongo zangaphambili zucchini, zifakwe kwiKorea, ngoko ngeendlela zonke ubhale iresiphi elandelayo yokuvunwa kwasebusika.
Izithako eziyimfuneko zeengxube ze-zucchini, zisetyenzisiwe ngesiKorea ebusika
zucchini -1, 5 kg
iviniga - 1/2 indebe
Ioli ye-sunflower - 1/2 indebe
ityuwa-1 tbsp. l.
umnyama omnyama ukula
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kwiindandatho ze-zucchini, ezihlambulukileyo zaseKorea ebusika
Zucchini zigalelwe emacongeni. Ukuba ngaphakathi kwimifuno sele sele isele iveliswe kakuhle imbewu, ngoko kukulungele ukukususa.
Iigrafu idluliselwa kwi-press okanye igxutywe kwi-grater. Iqela elincinci le-dill kwaye lenziwe ngokukhawuleza.
Kwisitya esinzulu, umzekelo, isitya se-enamel, di banisa ioli kunye neviniga. Emva koko wongeza i-dill kunye negalikhi, ityuwa kunye nepepper.
Hlanganisa kakuhle i-marinade uze ungeze izindandatho zeergetgettes. Qinisekisa ukuba onke amacongco aphethwe kakuhle kunye ne-marinade kwaye ashiye ekamelweni lokushisa ngeeyure eziyi-3-4.
Sasasaza i-marrows kunye ne-marinade kwiimbiza ezicocekileyo. Gubungela ngamabhodlela angabumba uze ufake efomeni lamanzi. I-bottom of the pan ikulungele ukusasazeka kwangaphambili ngethawula, ukwenzela ukuba ibhanki ingagqithwa ngexesha lotywala.
Siletha amanzi epanini kwipilisa kwaye senze iibhentshi zingakapheli imizuzu eyi-15. Susa ngokucophelela i-zucchini uze uvale isiqhekeza kunye nencoko yokulondoloza. Siphendulela ukupholisa.
Ii-Courgettes zaseKorea zexesha lokubusika-isisombululo esona sinambitheka esinqabileyo ngesinyathelo
Isambatho esenziwe ngokulungiswa kweladi yaseKorea esithengiswa phantse kuyo yonke ivenkile yokutya ikulungele ukuhlambulula i-zucchini ngokukhawuleza ebusika. Kwakhona, le recipe isebenzisa isixa esikhulu se-kroti kunye no-anyanisi, okwenza i-billet ifane kakhulu nesaladi yemifuno. Indlela yokupheka i-zucchini eKorea ebusika kwi-recipe elula kakhulu uya kufunda.
Izithako eziyimfuneko zucchini eKorea ebusika
izaqathe - 500 gr.
ityuwa (encinci) - 2 tbsp. l.
iviniga 9% - 150 ml.
ukuvuna iikroti eKorea - 1, 5 tsp.
Imiyalelo ye-recipe esiphundu i-zucchini e-Korea kunye nexesha lokubanda ebusika
Ukulungiselela le billet uya kuyidinga i-grater ekhethekileyo yee saladi kwisiKorea. Ngesiza sakhe, okokuqala siyihlamba i-zucchini kunye nesikhumba kunye nembewu.
I-anyanisi yahluthwa kwaye igalelwe imizimba emincinci. Iinqathi zihlambulukile kwaye zihlanjululwe kwi-grater ekhethekileyo.
Sidibanisa yonke imifuno ndawonye. Yongeza ushukela, ityuwa, ixesha lokutya.
Hlanganisa kakuhle kwaye uthele kuqala ngeoli, uze ube neviniga. Kwakhona, yonke into ixutywe kwaye ishiywe imizuzu engama-20, ukuze imifuno ivumele i juice, kwaye i-marinade yaqala ukusebenza.
Ubungakanani be-salad obulungiselelwe bufakwe kwiikhenki ezicocekileyo, phezulu kuhlanganiswe isiqhekeza kunye nokuthunyelwa kwintambo yokugoma - epanini ngamanzi okanye kwi-oven imizuzu eyi-15.
Emva koko, i-zucchini eyenziwe ngokulungelelaniswa kwisiKorea kwaye ijika. Qinisekisa ukuba unxibe umsebenzi oshisayo kwilula elifudumele okanye ingubo. Yenziwe!
I-Courgettes "Iminwe ithaqa" eKorea ebusika - iindlela zokupheka zihamba ngesinyathelo
Iintlobo zeergetgettes zaseKorea ebusika ebizwa ngokuthi "Iminwe yokukhohlisa" zininzi. Emva koko, sikunika enye yeendlela zokupheka ezilula kwaye zikhawuleza kule billet yasebusika. Funda ngokubanzi malunga nendlela yokulungisa i-zucchini "Iminwe ikhonkxa" e-Korea kubusika.
Izithako eziyimfuneko ze-zucchini "Iminwe ikhonkxa" e-Korean ebusika
zucchini - 1, 5 kg
izaqathe - 0, 5 kg
utamatisi -3 iifc.
i-pepper bulgarian -3 ii-pcs.
igalikhi - 50 gr.
isirayi -1/2 iglasi
iviniga -1 / 2 iglasi
ityuwa - 1 tbsp. l.
iziqholo ukuze zithande
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kwi recipe ye-zucchini "Khangela iminwe yakho" ngesiKorea
Amarrows am kwaye anqumle kwiigumbi. Coca utamatisi kunye nompu weBulgaria, uhluthwe kwiimbewu kunye neesahlulo, uthathe iibhubhu ezincinci.
I-anyanisi iyancibilika, kwaye igalikhi idlula kwigalikhi.
Kwisitya esinye sidibanisa i-zucchini, iitamatati kunye nepelepi. Songeza i-anyanisi kunye negalikhi, siyakhupha.
Songeza ezinye izithako ngokulandelelana okulandelayo: ushukela, ityuwa, ioli, iivini, iididi.
Sidibanisa yonke into ngenyameko ukwenzela ukuba i-marinade ityeke yonke imifuno. Yiya ngeyure kwiqondo lokushisa,
Sincinci ngomsebenzi owenziwe kwiimbiza ezinobumba kwaye sizithumele ekutheni inzalo ibe yipenki ngamanzi abilayo. Ukuze amathini afumaneke kwi-0.5-0.7 ilitha, ixesha lokumisela liza kuba malunga nemizuzu eyi-15. Emva kokuba isaladi ikhonkxwe kwaye ihlanganiswe ithawula elifudumeleyo.
I-zucchini esheshayo eselwandle yaseKorea ebusika-iresiphi elula-nge-nyathelo
Uluhlu olulandelayo lwe-zucchini olushushu olwandle olwandle lwaseKorea ebusika, ngokubhekiselele kwisiteyathelo esilula-nge-nyathelo, silungiswe ngokudibanisa i-tomate paste. Esi sithako senza i-zucchini iyancwina kwaye ityebile kwiimpawu zokunambitha. Indlela yokuhambisa i-zucchini ngokukhawuleza eKorea ebusika kwi-recipe elula ngaphantsi.
Izithako eziyimfuneko zokukhawulela i-zucchini e-Korea ebusika
zucchini -3 kg
unamathanga omathathu - 0, 5 ilitha.
igalikhi - 100 gr.
iviniga 9% -200 ml
i-kroti ye-Korean-seasoning tbsp. l.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo for recipe elula ye-zucchini esheshayo eselwandle e-Korean
I-Zucchini ecacileyo yembewu, kwaye kunye kunye nesikhumba esinqunywe kwiinqhezu ezincinci.
Sifaka i-zucchini kwipuphu enkulu. Yongeza i-tomato unamathela, iviniga, ushukela kunye netyuwa.
Yiza umxube ekubiliseni uze ubilise ngokukhawuleza umlilo malunga neyure.
Kwimizuzu engama-20 ngaphambi kokuphela kokupheka, engeza iziqholo kunye negalikhi, ucoce ngokukhawuleza. Yenza kakuhle kwaye upheke ixesha eliseleyo.
Ubunzima obushushu buyabonakala kwiimbiza ezinobumba kwaye zivalelwe. Akuyimfuneko ukutyhila le saladi. Kwanele kuphela ukuguquka emva kokuba iibhondi ziphosakele, kwaye kule ndawo ziyeke zize zicolile ngokupheleleyo.
I-zucchini e-Korean ehamba ngeemifuno ebusika - iresiphi yevidiyo
Ngaphandle kokunyusa, ukuhluka okugqithisiweyo kwi-zucchini e-marine eKorea ebusika yi-recipe kunye nemifuno. Ngokuqhelekileyo oomama bongeza iidroti kunye anyanisi, kodwa kukho iindlela zokupheka utamatisi, intsimbi ye-pepper, ii-chilli zithunyelwa kwiibhasi zucchini. Ukususela kokudibanisa kwezi zithako ezongezelelweyo, isaladi e-Korea iphela kuphela. Akumangalisi kubantu ngokuqhelekileyo kuthiwa i-zucchini "Iminwe ithabile." I-zucchini e-Maritime yaseKorea kunye nemifuno ebusika evela kwi-video-iresiphi elandelayo ingabizwa ngokukhethileyo. Ngokuphambene neendlela zokupheka zeetyucchini okanye iindandatho, kule vidiyo yonke imifuno ifakwe emanzini amancinci. Siyabulela kule nto, i-marinade yexesha elizayo isebenza ngokukhawuleza nangakumbi ngokufanelekileyo. Indlela yokucoca i-zucchini esiphundu e-Korea (iresiphi ebusika), kunye nemifuno, ijonge phambili.
I-Jelly ukusuka kwi-currant emnyama ebusika-i-step-by-step-step-steps kunye nesithombe
Iklabishi edlayo kunye neyohlanjululwayo ebusika emanzini phantsi kwesinyithi se-iron - isaladi, kwi-brine, kwisiKorea
Iidlela zokufumana umfazi womfazi olungeleyo: ulungiselela i-stew ebusika
I-Adjika ebusika - indlela enomnandi yokupheka kwiitamatati, i-pepper, i-zucchini, ii-apula kunye ne-plums. Indlela yokwenza ubumnandi busika azhik ngaphandle kwegalikhi
Indlela yokwenza ityuwa ebomvu i-tulips ebusika emanzini kubanda, kwomelele kwaye kushushu. Amakhowa asetyenziswe ngamanzi ebusika - iresiphi ngesithombe
Senza lula imizamo ebusika: zokupheka okumnandi zokulungiselela inyama
I-cottage cheese casserole ngeeapulo
IHoroscope yoNyaka omtsha, izikali
U-Witty uphendula imibuzo engacacanga
Iphayi echitshiweyo ngamantongomane
Ubuqhetseba, iso elibi, ukunyanzelwa okubi, ukuxilongwa nokukhuselwa
Indlela yokonwaba kunye nentanda
Ifayile ye pollock
Ukuphumla kwezingane zasesikolweni
Ziziphi iimpawu kunye nokuziphatha abafana na?
Ubisi lwe-Bird ubisi
Amaqebelengwane aseWalnut nge-cream sauce
Indlela yokufunda ukukhumbula amaphupha akho